Ku habboonaanta: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato shaatigan la jaray | Ragga Stylish
Ku habboonaanta dharka ayaa ka mid ah ereyada badan ee aad ka heli karto sumadaha markaad wax ka iibsanayso shaatiyada maanta. Inagoo si caadi ah oo caato ah aan uheli karno fikrad fiican oo fiican waxa lagafilayo, erayga loo habeeyay ayaa badanaa keena shaki.
Miyay u qalantaa in loo qaado qolka ku habboon ama, liddi ku ah, miyay fiicantahay in lagu sii wado qamaarka isla goynta aad isticmaashay illaa hadda? Soo ogow wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato waxa la sameeyo marka xigta shaar lebbiska ku habboon oo jidkaaga ka gudbaya.. Qaab noocee ah ayuu leeyahay, qeybaha jirka ee ay xoojisaa, sida ay uga duwan tahay jarista kale ...
1 Sida loo sameeyey si loo cabbiro (ama ku dhowaad)
2 Muxuu kaga duwan yahay inta hartay?
2.1 Qalab joogto ah
2.2 Slim xajmiga
2.3 Taam ku habboon
Sida loo sameeyey si loo cabbiro (ama ku dhowaad)
Sidaad horeba u ogayd, macneheedu waxa weeye in loo sameeyay cabbir ahaan. Caadi ahaan, shaati lebbiska ku habboon ma aha mid la mid ah midka dhabta ah ee loo sameeyay si loo qiyaaso shaati. Markii dawaarlaha uu soo dhexgalo shaati, filo taam ku habboon. Si kastaba ha noqotee, shaati lagu sharraxay ereyada loogu talagalay ku habboon calaamadda ayaa la tixgeliyaa kuugu dhow ee aad heli karto marka miisaaniyadda aysan ku filneyn dawaarle.
Ujeedada ku habboonaanta habboon ayaa ah inay gacan ka geysato kor u qaadista qaababka ragga. Qaar badan waxay u maleynayaan inay tahay goynta ku habboon jirka lab, ama ugu yaraan nooca jirku ku habboon yahay dhadhanka hadda jira. Nooc jimicsi oo jimicsi ah, ayaa ka shaqeyn jiray qolka jimicsiga, kaas oo garbaha, gacmaha iyo xabadka ay ka soo baxaan inta kale.
Muxuu kaga duwan yahay inta hartay?
Jiritaanka goobo badan oo kala geddisan ayaa loo arki karaa inay yihiin kuwo jahawareer leh, ama fiiri dhinaca dhalaalaya. Maaddaama ay jiraan siyaabo badan, fursadaha helitaanka shaati kugu habboon adiga ayaa si tartiib ah u tarmaya., ama ugu yaraan ku dhow dhow.
Sidoo kale, barashada kala-soocida shaatiyada kala duwan ayaa aad uga fudud sida ay umuuqato. Oo markii la milmay, waxay kaa caawin doontaa inaad hagaajiso qaabkaaga, maadaama aad si dhakhso ah u dooran karto midka ku habboon muuqaal kasta iyo munaasabad kasta adigoon fiirin calaamadda. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad fiiriso qaabkeeda.
Marka bal aan isbarbar dhigno ku habboonaanta la jaanqaadaya ta caadiga ah iyo tan caatada ah. Faahfaahin intee le'eg ayaa go'aamineysa mid kasta si uu u soo saaro saameyn kale oo jirkaaga ah?
Dharka caadiga ah ee ku habboon ma raacaan silhouette lab ah, laakiin waxaa lagu gartaa goynta toosan. Qiyaas laba jibbaaran. Si ka duwan inta kale, kuma haboona qayb ka mid ah jirka. Garbaha iyo gacmuhu way ballaaran yihiin. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay dhar dheeri ah oo ku yaal laabta iyo dhexda. Sababahan oo dhan, waa ikhtiyaar in la tixgeliyo haddii aad u baahan tahay shaati raaxo leh oo kuu oggolaanaya adiga xorriyadda weyn ee dhaqdhaqaaqa.
Waa fikrad wanaagsan ragga caato ah iyo kuwa cabirka badan. Waxay ka caawineysaa kii hore inuu gaaro xoogaa mug ah, halka kan dambe uu u oggolaado inay ka fogaadaan in shaadhku uu aad ugu dhow yahay jirka, iyada oo aan la gaarin heerka ugu sarreeya ee gooynta weyn. Laakiin guud ahaan, waa goyn si fiican ugu shaqeysa dhammaan noocyada jidhka lab.
Ugu dambeyntii qaabka meesha shaatiyadaha joogtada ah ee ugu habboon ay sifiican ugu habboon yihiin aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku dhejiso gudaha surwaalkaaga, adigoo abuuraya shaashad nadiif ah, waxay sidoo kale noqon karaan dhererka muuqaalka rasmiga ah.
Shaadhadh khafiif ah oo shaati ah ayaa wax walba ciriiri ku yihiin: xabadka, dhexda, cudurada gacmaha iyo gacmaha. Isticmaalka dhar ka yar ayaa sidoo kale lagu hubin karaa dhererkiisa. Marka loo eego jimicsiga caadiga ah, way ka gaaban yihiin.
Maaddaama shaati noocan ah ay ka tagayaan meel u dhexeysa dharka iyo jirka, waxaad ku guuleysan doontaa saameyn aad u sasabasho badan haddii aad leedahay calool fidsan. Qaybta togan waa taas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad waxqabad ka hesho dadaalka lagu sameeyay qolka jimicsiga. In kasta oo ay u oggolaadaan xorriyadda dhaqdhaqaaqa yar, waxay noqon doonaan caawimaad weyn markaad tixgeliso in munaasabaddu ay ku baaqeyso in la fiiriyo muuqaal muuqaal leh.
Qalabka ku habboon ayaa ku siinaya adiga meel dhexe oo udhaxeysa joogteynta caadiga ah iyo taatikada caatada ah. Waxay ka tagaysaa wax yar oo ka yar inta u dhexeysa jidhka iyo marada marka loo eego ta khafiifka ah, laakiin maaha sida ugu habboon ee joogtada ah. Waa in la ogaadaa in cabbirkaaga ku habboon ee loo qoondeeyey uu ku kala duwanaan karo iyadoo ku xiran soo saaraha.
Qaabkeedu wuu cidhiidhsan yahay kor ilaa hoos, isagoo sawiraya nooc saddexagal saddex geesle ah. Garbaha iyo gacmuhu way ballaadhan yihiin (waxay u dhigmaan ama ka badan yihiin sida caadiga ah), halka jirridu ay u janjeedho dhinaca dhexda. Si dhakhso leh ayaad u aqoonsan doontaa iyaga maxaa yeelay waxay leeyihiin garbi ballaadhan iyo dhexda oo cidhiidhi ah.
Sida khafiifka ah, waxay ka caawisaa sameynta silhouette nadiif ah, waana sababta Waxay noqon doontaa xulafadaada markaad ubaahantahay muuqaalka si aad uhesho qaab rasmi ah. Laakiin si ka duwan kan, kaas oo ka caawiya xoojinta dhererka, ku habboonaanta ku habboon ayaa ka dhigaysa buuxda jirka inuu sii muuqdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Taam ku habboon
Suudh ku habboon